Ny vehivavy izay manambady ny soavaly: akaiky sary ny fitiavana eo amin'ny vehivavy sy ny soavaly - Bradl
Zazavavy tia ny soavaly, ny ankizilahy milalao baolina kitra, ny fitsipika, ny orinasa dia mihazona sy hazavaina, pop ara-kolontsaina sary nandritra ny taona maro, raha tsy izany dia nandritra ny taonjato maro, fikirizana. Ny mpaka sary Wilma rivo-doza ho toy ny zanakao dia anisan ireo»soavaly ankizivavy’, manatona ny lohahevitra momba ny vehivavy sy ny soavaly toy ny olon-dehibe fa ny mazava ho samihafa. Ny vehivavy izay manambady ny soavaly dia ny amin’izao fotoana izao koa toy ny boky iray namoaka sary andian-ny Finn mandefa fahazavana amin’ny herin’ny maizina ny fifandraisana eo amin’ny lehilahy iray sy soavaly ary ny lafiny isan-karazany ny finamanana mandalina, misy foana ny mahery kokoa, mifototra amin’ny fanajana lalina ho an’ny tsirairay. Efa an -Taona, ny sary izay efa ny ao Eoropa sy Azia no namoaka, momba ny mahaliana ny biby, kely soavaly, ary saika ny raharaha ny fitsarana an-tendrony momba ny fifandraisana eo amin’ny vehivavy sy ny soavaly dia niresaka. Inona araka ny hevitrao no maha samy hafa ny fifandraisana eo amin’ny vehivavy sy ny soavaly ary ny lehilahy sy ny soavaly. Tsy azoko antoka hoe tsy maintsy ho tanteraka ny fahasamihafana lehibe. Na ny lehilahy sy ny vehivavy dia afaka manorina tena akaiky fatorana amin’ny soavaly. Amin’ny lafiny iray, misy izany sarin’ingahy irery cowboy, izay ihany no tsy mivadika-mitory aminy, dia ny soavaly. Etsy ankilany, ohatra, maro ny tovovavy izay mino ny iray taona, fa ny iray ihany, izay mahalala anao, dia ny malalanao Pony. Nihalehibe aho amin’ny kely telo ireo rahavavy sy efa naka sary izany no antony foana ny ankizivavy sy ny vehivavy, ary ny raharaha ity tetikasa ity, ireo vehivavy ireo hizara ny hafahafa izao tontolo izao miaraka amin’ireo zavaboary hafa. Nanao ahoana ny tetikasa tonga ny. Manana fifandraisana manokana ny lohahevitra. Tena maro tanteraka mbola kely foana misy maniry amin’ny tsy misy. Tsy mbola nanonofy ny amin’ny maha-zaza, mandeha mitaingina, afaka izany fa. Toy ny olon-dehibe, izaho efa naka lesona sy tena faly. Efa nanomboka ny hanao aho manahy momba ny fomba ny soavaly amin’ny zava-kanto toy ny mari-Pamantarana dia ampiasaina, ‘ve mamaky maro no Milaza izay soavaly nandray anjara ary manana ny ahy hametraka amin’ny fotoana iray amin’ny fanontaniana ny fomba mifandray amin’ny maha-olombelona amin’ny biby ireo. Ny soavaly dia toy ny karazana fitaratra mba ho azo antoka fa ny olona mahita Taratra ny tena fa raha tsy izany dia tsy maintsy mahazo. Mandritra izany fotoana izany, ity fitaratra dia nanjary tsy hay, ny instrumentalized, ny olona amin’ny biby ny famohana azy. Ny sary mampiseho vehivavy ny tena soavaly na ianao efa niara-niasa tamin’ny Modely. Ny sary voalohany, tsy maintsy mametraka, fa izany dia tena azo ampiharina, izany no antony efa Ny vehivavy te izay efa nandany ny ampahany lehibe ny fiainany amin’ny soavaly, ary ny miaraka amin’izy ireo tsara. Maro ny sary dia vita avy any ETAZONIA, ary mahafinaritra ny zatovovavy nihaona tamin’ny tovovavy, ohatra, izay nipetraka teo amin’ny soavaly ny hiverina eo anatrehanao afaka hihazakazaka araka ny tokony ho izy. Ny fiatrehana ny soavaly dia any Etazonia no tena hafa noho ny iray fantatro ny mpitaingina avy ny an-trano. Any Finlandy dia ny tsy mahita anao kokoa toy ny fialam-Boly, dia miara-miasa aminao. Nahita izany isaky ny raharaha, eo amin’ny insanely mafy, amin’ny andaniny sy ny ankilany ny fanajana ny fifandraisana eo amin’ny vehivavy (ary ny olona), ary ny soavaly izay nihalehibe miara sy ny samy hafa no nianarany. Izany dia tena sarotra ny mametraka fa ho teny. Niaina ny fotsy Pony fa ianao no teo am-Parafara sary, raha ny marina, ny vehivavy ao an-trano. Isika no nahazo azy ireo nandritra ny sary. Izany dia Arabella, kely ny soavaly izay ihany koa ny tena sahozanina.
Efa tena tsara vintana aho fa dia miara-miasa amin’ny fiofanana soavaly, dia afaka handry amin’ny didy. Mazava ho azy, izany dia karazana fiteny, fa: raha ny tena izy, koa izany no hazavaina, pop ara-kolontsaina sary indrindra ny tanora tovovavy, izay nilaza fa manana fifandraisana akaiky ny soavaly. Nahoana ianao no mieritreritra fa izany dia noho izany. Eny, izany no fiteny, ary indraindray aho mahita efa manafintohina ny fomba be dia be ny fisakaizana eo amin’ny tovovavy sy ny soavaly, ny tanora Dingana, ny fidirana dia eo anatrehanao liana amin’ny ankizilahy na ny firaisana ara-nofo.
Izany no tena sarotra kokoa
Tsy misy izany fikarakarana Singa, fa koa miasa mifanohitra izy. Soavaly dia tena azo idirana, dia manaiky ny maha-ianao anao ianao, ary ny ara-batana eo anatrehan’ny mety ho tena manome toky. Amin’ny lafiny iray, ianao koa dia mila ny olona izay manome fiadanana ho anao sy mitarika ho amin’ny zavatra azo ho an’ny tanora vehivavy dia fomba iray hahazoana ny tenanao ao amin’ny Toerana goavana mba hanandrana. Ny lehibe zavaboary miara-miasa, mba hiaina miaraka, ireo zavatra izay mety hahatonga anao ny mahita izao tontolo izao amin’ny fomba hafa mihitsy ny mahita, tahaka ny soavaly
← I India amin'ny Chat Roulette ho an'ny Android - Video Mampiaraka Download
Maimaim-Poana Niaraka Chat Indiana Mampiaraka →